Ogaden News Agency (ONA) – Qabridahar oo xalay sii xoogan loo miray iyo baabuur cadaw oo lagu gubay Dalaad
Qabridahar oo xalay sii xoogan loo miray iyo baabuur cadaw oo lagu gubay Dalaad
29/4/12 Waxay Ciidamada Wadaniga Xoraynta Ogadenya weerar habeenimo ku qaadeen mid ka mid ah xeryahay cadawgu ka dagan yahay maagalada Qabri-dahar, waxaana halkaas lagu gaadhsiiyay khaasare balaadhan oo dhimasho iyo dhaawacba leh. Dagaalkan oo ahaa mid lagu bartilmaameed-sanayay goob cayiman ayaa lagu guulaystay ujeedadii laga lahaa. Faahfaahinta weerarkan iyo dhibaatada xoogan ee cadawga lagu gaadhsiiyay ayaan soo ogaan doonaa inkastoo uu cadawga jabkiisa qarsanayo.
Dagaalkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa dagaaladii maalmihii u danbeeyay ay Naftood-hurayaasha ku bartilmaameed-sanayeen goobaha ay ciidamada cadawga ka dagan yihiin magaalooyinka waawayn.
Sidoo kale 27/4/12 waxa dagaalkan oo kale uu ka dhacay xerada cadawgu uu ka degan yahay ceelka Bulaale, kaasoo uu cadawga ka soo gaadhay khasaare kala duwan.
CWXO ee dagaalka hubaysan kula jira ciidanka cadawga ku soo duulay dalka Ogaadeenya ayaa kamiin ay ka galeen 28/4/12 wadada isku xidha Goday iyo Qabri-dahar gaar ahaan aaga Dalaad waxay halkaa ku gubeen hal baabuur iyo dhamaan ciidankii saraa, Waxaa kaloo uu ka soo gaadhay khasaare lixaad leh ciidamo gurmad ahaa oo soo gaadhay goobta kamiinka loogu dhigay cadawga, waxaana la xaqiijiyay in dhimasho iyo dhaawac badan loo gaystay.
23/4/12 dagaal ka dhacay Shinbira-Juujuu oo ka tirsan deegaanka Gari,go,an waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari, tira kalana waa lagaga dhaawacay.
24/4/ 12 khilaaf ka dhex dhacay ciidanka cadawga ee degan Garigo’an ayaa lagu dilay taliyihii ciidankaas oo magaciisa lagu sheegay ina Tuurtuur. Khilaafkan oo ahaa mid mudo socday oo sababay in ay baxsadaan ciidan badan oo ka tirsan kuwa cadawga ayaa waxa la sheegaayaa in ay ku diidanyihiin joogitaanka ay joogaan ciidanka cadawgu degmada Gari,go,an iyo dagaalka aan joogsiga lahayn ee kaga imaanaya ciidanka jabhadda.
Ugu danbayntii waxaa jira dagaal hore oo aan ku sheegnay in 23/4/ 12 baabuur lagu gubay Sagalada oo ka tirsann Qabri-bayax. Hadaba waxaan akhristayaasha ka raali galinaynaa in arin farsamo uu u khaldamay gobolka, waxaana weeye goobta dagaalku ka dhacay Sagalada oo ka tirsan degmada Qabri–dahar ee gobolka Qoraxay.